Posted by rose of sharon at 4:47 PM 18 comments: Links to this post
နှစ်သက်တာတွေ အများကြီး ရေးခဲ့ပြီးပါပြီ... မနှစ်သက်တာတွေ ရေးရမယ်ဆိုတော့လဲ ရေးစရာတွေက စဉ်းစားလိုက်တော့ အများကြီး...( ကိုယ်လဲလေလောကီသားပေမို့ :P )... အကျဉ်းချုံးပြီးတော့ဘဲရေးလိုက်ပါတယ်.... ...........................................................................................................
တက္ကစီစီးရင် ပိုက်ဆံပိုရအောင် ပတ်မောင်းတတ်တဲ့ ဗီယက်နမ်က တက္ကစီမောင်းသူတွေကိုမကြိုက်ဘူး
အင်္ဂလိပ်လိုလဲ မပြောနိုင် ကိုယ်က သူတို့စကားနဲ့ပြောတော့လဲ နိုင်ငံခြားသားပြောတဲ့ သူတို့စကားကို အသံဖမ်းနားမလည်ပေးနိုင်တဲ့ အတီးအတ ဗီယက်နမ်တွေကို မကြိုက်ဘူး
ဗီယက်နမ်မှာ ယောင်္ကျားတွေကြည့်ချင်စရာ ကောင်မလေးချောချောတွေ အများကြီးရှိပြီး မိန်းမတွေကြည့်ချင်စရာ ကောင်လေးချောချောတွေ တစ်ယောက်မှမရှိတာ မကြိုက်ဘူး
သားသမီးကို လိမ္မာယဉ်ကျေးအောင် မဆုံးမတတ်၊ဗဟုသုတလဲမရှိ၊လေ့လဲမလေ့လာ၊အသိဥာဏ်နည်းတဲ့ ခလေးတွေကျောင်းက မိဘတစ်ချို့ကိုမကြိုက်ဘူး (သူတို့သားသမီးတွေက ကိုယ့်ခလေးတွေကို ဗိုလ်လာလာကျလို့)
မနက်၅နာရီထက်စောပြီး အိပ်ရာထရတာကို မကြိုက်ဘူး
စကားတွေအပိုလုပ်ပြော၊တကယ်မဟုတ်ဘဲ ကြွားတတ်ကြတဲ့သူတွေကို မကြိုက်ဘူး
သူတို့လုပ်တာမှအကောင်းထင်၊သူတို့လုပ်တာတွေလိုက်လုပ်မှ ကောင်းတယ်ထင်တတ်ကြသူတွေကို မကြိုက်ဘူး
တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာ တခါတလေ မေ့မေ့ဆီဖုန်းဆက်လို့မရရင် မကြိုက်ဘူး
ဆွေမျိုးတွေ တခါတလေ စိတ်အခန့်မသင့်ဖြစ်ကြတာ ကြားရရင် မကြိုက်ဘူး
မကြိုက်ဘူး ....မကြိုက်ဘူး.... မကြိုက်ဘူး.... မကြိုက်ဘူး.... မကြိုက်ဘူး....မကြိုက်ဘူး.... (ခြင် နှင့် ဝက်ဝံလေး တို့အား တဂ်ပါသည်)
Posted by rose of sharon at 10:40 AM 8 comments: Links to this post
အိပ်ရာနိုးနိုးချင်း ကိုယ့်ရဲ့ဘယ်ဘက်မှာအိပ်နေတဲ့သားလေးနဲ့ ညာဘက်မှာအိပ်နေတဲ့သမီးလေးကို ဖွဖွလေးနမ်းရတာနှစ်သက်တယ်…
အလုပ်သွားခါနီးခင်ပွန်းအတွက်နဲ့ ကျောင်းသွားခါနီးသားနဲ့သမီးအတွက် မနက်စာချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ပေးရတာကိုနှစ်သက်တယ်…
မနက်စောစော ပဲဆီနဲ့နှပ်ထားတဲ့ လက်ဖက်အသားကို ပဲကြော်၊ပုဇွန်ခြောက်၊ထမင်းဖြူတွေနဲ့ နယ်စားပြီး ကော်ဖီပူပူမွှေးမွှေးလေးမှုတ်သောက်ရတာနှစ်သက်တယ်…
သားနဲ့သမီးကို ဘယ်ညာလက်တွဲပြီး ကျောင်းလိုက်ပို့ရတာကို နှစ်သက်တယ်…
ခင်ပွန်းကအလုပ်သွား ခလေးတွေကကျောင်းသွားချိန်မှာ ဘလော့လည် ဖေ့ဘွတ်ဝင် ဂိမ်းတွေဆော့ရတာကိုနှစ်သက်တယ်…
ခလေးတွေကျောင်းသွားနေတုန်း သူတို့ဆော့လက်စ ကွန်ပျူတာဂိမ်းတွေကို level တက်အောင် ကူဆော့ပေးရတာ နှစ်သက်တယ်…
အင်တာနက်ကော်နက်ရှင်မကောင်းတဲ့နေ့တွေမှာ ရှော့ပင်းစန်တာတွေမှာ ဈေးထွက်ဝယ်ရတာကို နှစ်သက်တယ်…
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ချိန်းပြီး နေ့လည်စာထွက်စားရတာကို နှစ်သက်တယ်…
မြန်မာအစားအစာတွေချက်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေကို ဖိတ်ကျွေးရတာ နှစ်သက်တယ်…
သူငယ်ချင်းတွေအိမ်သွားလည်ပြီး သူတို့ချက်တာတွေ စားရတာကိုနှစ်သက်တယ်…
သားနဲ့သမီးကို ကျောင်းသွားကြိုရတာကို နှစ်သက်တယ်…
ခလေးတွေကျောင်းကဆရာ ဆရာမတွေနဲ့ ခလေးတွေအကြောင်း ဆွေးနွေးရတာ နှစ်သက်တယ်…
အလုပ်ကပြန်လာတဲ့ခင်ပွန်းကို အပြုံးနဲ့ကြိုဆိုရတာ နှစ်သက်တယ်…
ခင်ပွန်းကို ခလေးတွေရဲ့ တနေ့တာ ကျောင်းကအကြောင်းတွေကို ပြောပြရတာ နှစ်သက်တယ်…
ခင်ပွန်းက လစာထုတ်တဲ့နေ့တိုင်း လစာအပ်တာကို နှစ်သက်တယ်…
အိမ်မှာတခုခု အရေးပေါ်လိုအပ်တိုင်း ခင်ပွန်းက ဆိုင်ကယ်နဲ့ အပြင်ထွက်သွားဝယ်ပေးတတ်တာကို နှစ်သက်တယ်…
ခင်ပွန်းက အပြင်ကပြန်လာတိုင်း စားစရာတခုခု ဝယ်လာပေးတတ်တာကို နှစ်သက်တယ်…
ရုံးပိတ်ရက်တိုင်း ခင်ပွန်းက wet market မှာ ဟင်းချက်စရာတွေ သွားဝယ်ပေးတတ်တာကို နှစ်သက်တယ်…
စနေတနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာ မိသားစုအပြင်ထွက်ပြီး ရှော့ပင်ထွက် နေ့လည်စာထွက်စားရတာကို နှစ်သက်တယ်…
အိပ်ရာဝင်ခါနီးတိုင်း ခလေးတွေနဲ့ အတူတူ ဘုရားရှိခိုးရတာကို နှစ်သက်တယ်…
အိပ်ခါနီးတိုင်း ခလေးနှစ်ယောက်ကို ဖွဖွလေးနမ်းပြီး I love you လို့ပြောရတာကိုနှစ်သက်တယ်…
(Kiki, ခြင် နှင့် ဝက်ဝံလေးတို့ကို တဂ်ပါသည်... ရေးပေးကြတော်မူပါ)
Posted by rose of sharon at 3:17 PM 16 comments: Links to this post
ဒီတစ်ခေါက်ခလေးတွေကျောင်းက ၂၉ ရက် ဧပြီလကနေ ၉ရက် မေလအထိပိတ်တယ်… ဗီယက်နမ်ထဲမှာလဲ beach တွေဘဲသွားနေရတာရိုးလာတာရယ်… သမီးလေးနဲ့သားလေး လိုချင်တာတစ်ချို့ဗီယက်နမ်မှာ ဝယ်မရတာရယ်ကြောင့် စကာင်္ပူသွားလည်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်… ခလေးတွေရဲ့အဖေပါလိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင် တစ်ပတ်လောက်နေဘို့စဉ်းစားထားပေမဲ့ သူအလုပ်မအားလို့ မလိုက်နိုင်တော့တာကြောင့် ကျမတို့သားအမိတွေချည်းမို့ ၄ရက်ဘဲနေပါတော့မယ်… အရင်အခေါက်တွေက နေရာတွေစုံအောင်ရောက်ဖူးပြီးသွားပြီမို့ အခုထိတော့ လည်မယ့်နေရာတွေ မစဉ်းစားထားပါဘူး… ခလေးတွေသွားချင်တဲ့နေရာတွေဘဲ လိုက်ပို့ဖြစ်မှာပါ… စကာင်္ပူရောက်တိုင်း နေ့တိုင်းသွားဖြစ်တာက Bugis Junction ပါ… သမီးလေးက အဲဒီအပေါ်ထပ်က ဂိမ်းစင်တာကို သဘောကျတယ်… တခြားမှာ ဒိထက်ကောင်းတဲ့ ကစားကွင်းတွေ ရှိလဲ အဲဒီနေရာကိုဘဲ သူနေ့တိုင်းသွားချင်တာမို့ ဒီတစ်ခေါက်လဲ အဲဒီဘဲနေ့တိုင်းသွားဖြစ်မှာဆိုတော့ ဟိုတယ်ကို အဲဒီနားမှာရှာထားပါတယ်… တခြားနိုင်ငံတွေခရီးထွက်တိုင်း ဟိုတယ်ကို Asiatravel ကနေရှာနေကြမို့ ဒီတခေါက်လဲ သူတို့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေဘဲရှာပါတယ်… ၄ယောက်တခန်းရဘို့က ဝက်ဆိုဒ်ကနေရှာရတာ ခက်ပါတယ်… လူကြီး၂ယောက်နဲ့ခလေးတစ်ယောက် နေလို့ရတဲ့အခန်းတွေဘဲများတယ်... Bugis Juction နဲ့လဲနီး ၄ယောက်နေလို့ရမဲ့အခန်း ကရမဲ့ရတော့ သိပ်မကောင်းမှန်းသိပေမဲ့ ယူလိုက်ပါတယ်… ကျမက စိတ်မြန်တော့ အရင်တွေ့တဲ့ဟာကိုဘဲ ချက်ချင်းဘွတ်ကင်တင်လိုက်တာ တန်းရသွားတော့ နောင်တ တောင်နဲနဲရလိုက်တယ်… ဒါပေမဲ့ ခလေးတွေကို ပြကြည့်တော့ ကြိုက်ပါတယ် ဆိုတာနဲ့ စိတ်အေးသွားပါတယ်…ပိုက်ဆံလည်း အင်တာနက်ကနေ တခါတည်း အကြေချေရတာမို့ မကြိုက်ကြရင်လည်း ဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူး….
စကာင်္ပူကမရောက်ဖြစ်တာ၃နှစ်လောက်ရှိပြီ…. ငယ်သူငယ်ချင်းတချို့လဲရှိနေတာမို့ သူတို့နဲ့တွေ့ရမှာပျော်နေပါတယ်…ဒီတခေါက်တော့ လူမမြင်ဘူးဘဲ ဘလော့ပေါ်မှာရင်းနှီးနေတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ချို့နဲ့လဲတွေ့ဖြစ်မှာမို့ အရင်အခေါက်တွေထက် ပိုပျော်ရမှာသေချာတယ်… ကိုယ့်ကိုဆက်သွယ်မဲ့သူတွေကိုဘဲတွေ့ဖြစ်မှာပါ… ကိုယ်ကဘလော့ဂါတွေအားလုံးကိုတွေ့ချင်ပေမဲ့ ကိုယ်ကစတွေ့ဘို့မတောင်းဆိုချင်ပါဘူး… အကြောင်းရင်းကတော့ ကိုယ်ကတွေ့ဘို့တောင်းဆိုမိရင် အငြင်းခံလိုက်ရမှာစိုးရိမ်လို့ပါ (ကျမက ရှက်တတ်တယ်ရှင့်)…. အရင်တုန်းက ဘလော့ပေါ်မှာ ဖေ့ဘွတ်ပေါ်မှာ အစားအသောက်တွေဓာတ်ပုံရိုက်တင်ကြလို့ ကိုယ်ကစားချင်တယ်ပြောဖူးတဲ့အခါ စကာင်္ပူလာလည်ရင် ချက်ကျွေးမယ်လို့ ပြောထားကြဘူးသူတွေ သတိရကြပါစေ.. :P…. မှတ်မှတ်ရရ စကာင်္ပူလာရင်စားချင်တာတွေချက်ကျွေးမယ်ဆိုတဲ့ ဘလော့ဂါခြောက်ယောက်လောက်ရှိပါတယ်…. တွေ့ကြသေးတာပေါ့…. တကယ်ပြောတာဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာ သိရတော့မယ်… :P… (တကယ်က ကျမမှာ အိမ်လည်လျှောက်စားဖို့ အချိန်မရှိပါဘူး… လေးရက်အတွင်းမှာ ခလေးတွေသွားချင်တဲ့ ကစားလို့ရတဲ့နေရာတွေဘဲသွားဖြစ်မှာပါ…)
၄ရက်ဆိုတဲ့အချိန်ကတိုတိုလေးဆိုတော့ ခလေးတွေနဲ့ဘယ်နေရာကိုသွားလည်သင့်တယ်ဆိုတာလေးတွေ အကြံပေးကြပါလို့ တောင်းဆိုပါတယ်… အခါတိုင်းက ယောင်္ကျားက ဦဆောင်ပြီး ကိုယ်နဲ့ခလေးတွေက နောက်ကလိုက်ရုံဘဲ… အခုသူမပါတော့ ကိုယ့်ဟာကို စီစဉ်ရမှာ… ( သနားစရာနော်  )
အခုတော့ အရင်ကသွားဖူးပြီးသားနေရာတွေထဲက သူတို့ဘယ်တွေပြန်သွားချင်လဲ မေးနေတုန်းပါဘဲ… Bugis Junction ကတော့နေ့တိုင်းသွားဖြစ်မှာပါ… အပြင်မှာတခါမှမဆုံဖူးပေမဲ့ ဘလော့ပေါ်မှာသိပြီး ဖေ့ဘွတ်ပေါ်မှာ ရင်းနှီးခဲ့ရတဲ့ ဘလော့ဂါသူငယ်ချင်းလေးက လေဆိပ်လာကြိုမယ်ဆိုတော့ အရမ်းကိုဝမ်းသာမိပါတယ်… အရင်အခေါက်တွေကလာတိုင်း လေဆိပ်ကနေ တက္ကဆီစီးပြီးတည်းမဲ့ နေရာကိုသွားနေကျပါ… တကူးတကလာကြိုမဲ့ သူ့ရဲ့ဖော်ရွေခင်မင်မှုကို တကယ်ဘဲတန်ဘိုးထားမိပါတယ်…. ကျမမြင်ဖူးချင်သော ဘလော့ဂါသူငယ်ချင်းများကို အခွင့်ရရင်တွေ့ချင်ပါတယ်… တွေ့ခွင့်မရရင်တောင် ဖုန်းလေးနဲ့တော့နှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်… ကျမရဲ့ မေးလ်ကို ဖုန်းနံပါတ်လေးပို့ပေးမယ်ဆိုရင် ကျမဖုန်းဆက်ပြီးနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်… (ကျေးဇူးပြု၍ဖုန်းနံပါတ်လေးများမစပါ)
(ဒီလိုဘဲတုံးတိတိနှင့်ပို့စ်ကို အဆုံးသတ်လိုက်ပါသည် :P )
Posted by rose of sharon at 6:31 AM 13 comments: Links to this post